Uganda oo Ciidamo Dheeraad ah usoo diraysa Soomaaliya – Radio SYL
Uganda oo Ciidamo Dheeraad ah usoo diraysa Soomaaliya
Dowladda Uganda ayaa ciidamo dheeri ah usoo diraysa wadanka Soomaaliya oo ay horay ciidamo uga joogeen, si qayb ay uga noqdaan howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM.
Ciidamadan oo tababar kusoo qaatay xarunta tababarada ee Singo ee katirsan degmada Nakaseke ayaa loo sheegay inay qayb ka noqdaan soo celinta nabadda Soomaaliya iyo la dagaalanka kooxda Al-shabaab oo xasiloonida iyo nabadda Soomaaliya si’aad ah uga soo horjeedda.
Gen David Muhoozi oo ah taliyaha ciidamada difaaca ee Uganda ayaa sheegay ciidamadan inay qayb ka noqon doonaan howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM.
Waxaa uu kula daardaarmay inay ilaaliyaan suncadda iyo anshaxa ciidamada, inta ay ku guda jiraan howlgalka Soomaaliya ay u aadayaan.
Uganda oo ah dowladda ciidamada ugu badan ee AMISOM usoo dirta Soomaaliya ayaa horay waxaa uga joogay lix kun oo askari, balse wali ma muuqato howlgalka AMISOM oo toban sano muddo ka badan jooga Soomaaliya hormar ay ka sameeyeen ammaanka iyo la dagaalanka Al-shabaab, waxaana dad badan oo Soomaali ah ay u arkaan inay tahay mashruuc ay dowladaha Adduunka ay dhaqaalle ku raadinayaan si’aan loo cirib tirin.